အသေမြတ်ချင် သေနည်းသင်	Posted on October 17, 2009	by mettayate ဗုဒ္ဓက –
“အတ္တာဟိ အတ္တနော နာထော” – မိမိကိုယ်သာလျှင် မိမိကိုးကွယ်အားထားရာဟူသော ဒေသနာတော်၏ တိကျမှန်ကန်မှုကို အသက်ရှင်နေထိုင်စဉ်ကထက် သေခါနီး အချိန်တွင် ပို၍ သိလာနိုင်သည်။
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← နေ ခြောက်ချက်၊ သေ ခြောက်ချက်